Shaqadayada - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > our Work
Waxaan abuureynaa isbedelka aan dooneyno inaan aragno anagoo ka shaqeyneyno midnimo iyo dhisida awood si aan ula imaano hogaan cusub - hogaaminta soogalootiga - shaqada dhisida bulsho kafiican dhamaan dadka. Shaqadayada si cadaalad ah oo Colorado ah ayaa waxaa hogaamiya oo hogaamiya hogaamiyaasha soogalootiga kuwaas oo go'aamiya jihada dadaalkeena u doodista, ololayaasha, iyo adeegyada sharciga. Iyada oo loo marayo barnaamijyadeena iyo ololaheena, isbahaysigeenu wuxuu sii wadaa inuu ku guuleysto guulaha muhiimka ah ee soogalootiga ku sugan Colorado isagoo hubinaya in soogalooti kasta oo gobolkeena ka tirsan uu cod ku leeyahay halganka aan ugu jirno cadaaladda.
CIRC waxay taageertay sharci cusub oo lagu abuurayo sanduuqa difaaca sharciga ee gobolka oo dhan, si qofna uusan u wajihin xarig iyo masaafuris isagoon helin wakiil sharci.
Shaqadeena inaan ku dhisno ilaalin xog xoogleh dhammaan, sidaa darteed Coloradans waxay heli karaan daryeel caafimaad, liisamada darawalnimada, ama adeegyo kale oo lagu kalsoon yahay in macluumaadkooda shaqsiyeed aan lagu soo bandhigi doonin ICE.
Dibuhabeynta TAHRIIBTA FEDERAALKA
Waxaan dalbaneynaa dib-u-habeyn geesinimo leh si aan ugu bedelno nidaamkeena socdaalka mid ka mid ah kan daboolaya baqdin ajnabi nacaybka loona beddelo mid ka mid ah xarumaha caddaaladda iyo aadanaha.
Ilaali oo xooji bulshadayada adoo martigelinaya tababarka CIRC "Ogow Xuquuqdaada" ama tabaruce kooxda la shaqeysa ee khadka tooska ah ee waxqabadka 24/7 ICE.
SB-251: RUQSADAHA WADAHA
Ka dalbo liisanka darawalnimada, iyada oo aan loo eegin heerka socdaalka, mid ka mid ah 11 xafiisyada DMV ee ku yaal dhammaan nidaamka shatiyada SB-251.
Qaad tallaabada xigta ee ku wajahan muwaadinnimada ama sharci ku meel gaar ah maanta adiga oo iska diiwaangeliya aqoon isweydaarsiyo, dib u eegis ku sameeya kheyraadkeena, ama aad codsato ballan shaqsiyeed.